“म बाँ'च्नु त अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए”। – सपना रोका मगर ( भिडियो सहित) - Nawalpur Dainik
“म बाँ’च्नु त अब के का लागि ? सडकछाप भनेर चिनिए”। – सपना रोका मगर ( भिडियो सहित)
बीबीसीको सूचीमा परेपछि उनले आफू गौरवान्वित भएको बताएकी छन्। “यसबाट मैले थप प्रोत्साहन पाएकी छ। अनि यो सामान्य नेपाली महिलाको लागि प्रेरणा हो, हामी सबैको लागि ठूलो सम्मान हो।” म्याग्दी घर भएकी सपना पढाइको लागि काठमाण्डौ आएकी थिईन । यहाँ आएपछि उनले बे’वारिसे ला’श ज’लाउने गरेको देखेपछि उनले पनि यही काम थालेकी थिइन्
Prevकेटिले केटि संगै बिहे गरे भन्छन् केटा भन्दा केटि केटी नै बढी म’ज्जा आउछ , यसरी खोले सु’हा ग रातको पोल (भिडियो सहित)
Nextश्रिमान बिदेशमा, श्रीमती यता अर्कैको काखमा,दृश्य बा’हिरियो (हेर्नुस् भिडियो)